शिक्षक सम्बन्धि यस्तो नयाँ व्यस्था अर्थ मन्त्रालयले खारेज गरिदियो « Janaboli
शिक्षक सम्बन्धि यस्तो नयाँ व्यस्था अर्थ मन्त्रालयले खारेज गरिदियो
काठमाडौ । विद्यालय तहका शिक्षकको योग्यता परीक्षण नेपाल शिक्षण परिषद् (नेपाल टिचिङ्ग काउन्सिल) बाट गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्विकृत गरिदिएको छ । काउन्सिल गठनको व्यवस्था सहित तयार राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले उक्त असहमती जनाएको हो ।
११ सदस्यीय काउन्सिलमा पन्ध्र बर्ष शिक्षण अनुभव प्राप्त शिक्षक वा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्हरु मध्येबाट सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्षको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तोकिएको छ । सदस्यहरुमा शिक्षक महासंघ अध्यक्ष, महासंघकै सिफारिसमा कम्तीमा एक महिला सहित दुई जना शिक्षक, अभिभावकहरुका संघ-संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट दुई जना, स्नातकोपाधि हासिल गरी शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, शिक्षण क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना,
मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा हर्ने सहसचिव, राष्ट्रिय शिक्षा विभागमा कार्यरत सहसचिव स्तरका एक जना प्रतिनिधि, शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय अधिकृत रहने छन् । काउन्सिलको दैनिक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य गर्नका लागि शिक्षा सेवाको रा.प. प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई मन्त्रालयले काउन्सिलको रजिष्ट्रार तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
शिक्षक उत्पादन गर्नका लागि पेशागत कोर्श सञ्चालन गर्ने उच्च शिक्षण संस्थाहरुको मापदण्ड निर्धारण तथा स्तरीकरण गर्ने, शिक्षण पेशामा संलग्न भएका र हुन चाहने अध्यापन अनुमतिप्राप्त व्यक्तिहरुको विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने काम काउन्सिलले गर्ने उल्लेख छ । यस्तै अध्यापन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने, शिक्षण तथा प्राध्यापन पेशाका पेशाकर्मीहरुको आचारसंहिता बनाई लागु गर्ने काम पनि काउन्सिलको हुने छ ।
शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न चाहने र प्रवेश गरेका जनशक्तिहरुको रजिष्ट्रेशन गरी अभिलेख राख्ने जिम्मा पनि काउन्सिललाई दिन ऐनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षक तालिम र पेशागत विकास सम्बन्धी नीति, मापदण्ड र पाठ्यक्रम सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने काम पनि काउन्सिलको हुने छ ।
काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारका तर्फबाट संसदमा प्रस्ताव गरेको बजेटप्रति सत्तारुढ दलकै नेता
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण निर्देशिका
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्तै महत्वपुर्ण जानकारी साझा गरेको छ । त्रिवि प्राज्ञिक
काठमाडौ । आगामी जेठ २१ गते बुधबारबाट निजी विद्यालयले सामाजिक दुरीसहित विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरू